Izindlela Ezilula Zokwenza Usuku Lokuwasha Lunobungane! - Isikhungo se-EcoTechnology
Muva nje, ngilalele eyikaMalcom Gladwell Izimboni zePushkin Podcast ngendlela esimeme kunazo ukuwasha izingubo zethu. Kwakungenza ngizibuze, ini is insipho yokuhlanza impahla esimeme? Ngabe ukugeza ngamanzi abandayo kuyazihlanza izingubo zami?
Ngemikhiqizo eminingi kangaka ehlanganiswe ngemibala emihle eluhlaza namaphethini wemvelo kulezi zinsuku, kunzima ukwazi ukuthi yimiphi imikhiqizo ongayethemba ngokuwasha kwethu okungcolile.
I-podcast kaMalcom ibonakale ezinsukwini zokuqala zokuwashwa ngamabhodi okuwasha, izintambo zezingubo nezinsipho ezenziwe ekhaya. Ngokufanelekile, sonke besingaletha imithwalo yethu emfuleni ukuyogeza ngezinsipho zemvelo bese siyilengisa ukuze yome, bese sikhanya ekukhanyeni kokuwashwa kwekhabhoni okungathathi hlangothi. Kepha lo mkhuba osebenzayo nesikhathi esiningi akuwona owangempela wethu. Uma kukhulunywa iqiniso, ngiyabonga kakhulu ngomlingo wemishini yethu. Isilayishi sami esithembekile sangaphambili singangena, sisuse amabala futhi sihlanze izingubo zami ngokucindezela inkinobho.
Izinto ziqinisekisiwe ukuthi sezilula, kepha ukusetshenziswa kwamanzi namandla kuyahlanganiswa.
Ngokuvumelana ne Iphrojekthi Yokuwasha, Umndeni ojwayelekile waseMelika wenza ilitshi elingu-8-10 masonto onke. Lokho kuhumusha cishe imithwalo eyizigidi ezingama-660 minyaka yonke, noma imithwalo eyinkulungwane iqale njalo ngomzuzwana eMelika.
Iyiphi ingxenye edonsa kakhulu ikhabhoni yokuwasha izingubo?
Ku-podcast, uGladwell uxoxisane nenhloko yesigaba se-P & G sikaNyakatho Melika yocwaningo nentuthuko ye-Fabric Care, uTod Klien, noma “umphathi wezimpahla zaseMelika”. Lapho ecwaninga ngomkhondo wekhabhoni womkhiqizo ngamunye wokuwashwa, uKlien uthole ukuthi "isigaba sokusetshenziswa komkhiqizo", noma amasiko okuhlanza abathengi, enza izingxenye ezimbili kwezintathu zomthelela kwezemvelo. Iningi lalesi sinyathelo sivela emandleni asetshenziselwa ukushisa amanzi.
Ngenxa yokuthi izinto zokusetshenziswa, ukukhiqizwa nokuthunyelwa kwensipho yokuwasha akulutho uma kuqhathaniswa namandla asetshenziselwa ukufudumeza amanzi, uGladwell uphethe ngokuthi “umthelela wezemvelo lapho kutholakala khona ilondolo kuba yilokho thina, abantu abasekhaya, esikwenzayo.” Kunjalo bakithi, uma kukhulunywa ngokuwashwa, thina can yenza izinqumo ezenza umehluko.
Kungani Kufanele Kugcine Kubanda?
Ukusebenzisa amanzi abandayo konga u-90% wamandla esigabeni sokusetshenziswa (i-Energy Star). Kuyasiza nokuthi izingubo zakho zihlale isikhathi eside futhi kunciphisa imibala ephuma egazini futhi ifiphale. Ngakho-ke ngeke ugcine amandla kuphela, uzobukeka uyisitayela ngokwengeziwe!
Ngabe i-Detergent Inquma Ukuqina Kwesimo Sezulu?
Ngokusho kukaKlien, izinto zokuhlanza zisebenzisa ama-surfactants nama-polymers asiza ukubamba ibala bese elidonsela emanzini, bese esebenzisa ama-enzyme ukudiliza izinhlobo ezahlukahlukene zamabala. La ma-enzyme kufanele akhelwe ngqo amanzi abandayo ukuze asebenze kahle ekuhlanzeni izingubo. Ukuphendula kwamakhemikhali phakathi kokuhlanza kanye namabala kuncipha kakhulu njengoba izinga lokushisa lehla, ngakho-ke onjiniyela bakhiqize okokuhlanza ikakhulukazi ukugeza ngamanzi abandayo.
Ngakho-ke, amafomula "emvelo" wemikhiqizo eminingi yokuwashwa okuluhlaza angaba sibi kakhulu ekuhlanzeni imithwalo yakho emanzini abandayo kunaleyo ejwayelekile.
Kepha Kuthiwani NgamaSud?
Uke wabona okokuhlanza ukuziqhayisa ngama-suds aphansi, noma amanye akhombisa amagwebu athe xaxa kuphakethe. Impikiswano yama-suds yehlela kakhulu ohlotsheni lomshini wokuwasha onayo. Ama-detergent avamile enzelwe amanzi amaningi, akhiqiza amabhamuza wensipho amaningi kunamafomula wokusebenza kahle (HE). Imishini eminingi yokuwasha esebenza kahle kakhulu inezinzwa ezizwa ngama-sud ekugcineni komjikelezo wokuhlanza. Uma kukhona, kuzokwenza okunye ukugeza, kusetshenziswa amanzi athe xaxa ukuthola amanye ama-suds. Ngenkathi wonke lawo mabhamuza enza kubonakale kuhlanzeke, ama-suds amancane avame ukuba ngcono ngoba amaningi kakhulu angabeka umhlabathi ezingutsheni zakho ngemuva kokumiswa (Iphrojekthi Yokuhlanza).
Ngakho-ke, yini esiyaziyo?
Okuwukuphela kwendlela yokuhlanza insipho ukuthi ikwazi ukusimama ngokweqiniso uma isebenza emanzini abandayo.
Ukugeza ngamanzi abandayo kuwumkhuba omuhle kakhulu ongawenza ngemuva kokubuyekeza izinto zakho zokusebenza zisebenzisa ezonga ugesi! Ngokushintsha nje inkinobho eyodwa ucindezele uye kolunye, ungonga u-90% wamandla akho, unciphise i-carbon footprint yakho, wonge imali kwizikweletu zombuso futhi wandise impilo yengubo yakho! Kulula ngempela lokho.
Ezinye izeluleko zokulondolozwa kwendle okusimeme kusuka Treehugger:
Qalisa imithwalo egcwele lapho kungenzeka khona
Imishini isebenzisa amandla alinganayo kungakhathalekile usayizi womthwalo, ngakho-ke gcwalisa. Lokhu kungonga indlu yakho engamakhilogremu angama-99 ekhishwa isikhutha unyaka nonyaka!
Uma umshini wakho unawo, sebenzisa inketho ephezulu yokujikeleza.
Uma usebenzisa isomisi, lokhu kunciphisa inani lomswakama ezingutsheni zakho lapho uzilayisha, usika isikhathi namandla adingekayo ukuzomisa.
Hlanganisa izingubo zakho ukuze zome, uma kungenzeka.
Lokhu kungonga indlu yakho kuze kufike kumakhilogremu angama-700 e-carbon dioxide ngonyaka, kanye nama- $ 75 bucks kusikweletu sakho sosizo.
Buyekeza izinto zakho zokusebenza zibe amamodeli asebenza kahle.
Buza inkampani yakho yamandla kagesi ukuthi iziphi izaphulelo ezitholakalayo zokuvuselela izinto zakho zokusebenza.
Septemba 1st, i-2021 | 0 Amazwana